အယ်ဖိုး: April 2010
ကောင်းလိုက်တဲ့ Software။ လှလိုက်တဲ့ ဘောင်။ Photo shop မှာ ဆိုရင် ဓာတ်ပုံတပုံကို frame ထည့်မယ်ဆိုရင် တော်တော်ကို ပင်ပန်တယ်လို့ ပြောရမလားမသိဘူး။ လှလှပပ အဆင်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင် အဆင့်တွေ တော်တော်များများလုပ်ရပါတယ်။ အကယ်လို့ ဓာတ်ပုံဆိုင် လုပ်တဲ့ သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အပျော်တမ်း ကိုယ်ဓာတ်ပုံကို စမ်းကြည့်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဓာတ်ပုံဘောင်လုပ်တဲ့အခါတော့ တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်။ အခု ဒီ Software လေးကတော့ တကယ့်ကို မိုက်တယ်လို့ ပြောရပါလိမ်မယ်။ လှ လည် အလှ တယ် သုံးရတာလည်း အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဓာတ်ပုံ ဘောင်ကို ဒီ Software နဲ့ပဲ ဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ်။ ကဲ လုံးဝသုံးကြည့်ကြပါ။ သုံးနည်းကိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ဆရာသမားတွေက တော်ပါတယ် နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်လိုက်ရင်သိသွားမှာပါ။
Posted by Peace at 10:44 PM0comments Links to this post
window တင်ပြီးခါမှ HDD ကို partition ဘယ်လို ပြန်ပိုင်းမလဲ
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ window တင်ပြီးခါ ကျမှ partition ပြန်ပိုင်းချင်တယ် တစ်နည်းအားဖြင့် HDD ကို ထပ်ပြီးတော့ တစ်ပိုင်း ထပ်ခွဲချင်တာမျိုး ပေါင်းချင်တာမျိုး လုပ်ချင်တယ် အခက်အခဲ ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ အခု တင်ပေးလိုက်တဲ့ EASEUS Partition Master နဲ့ ပိုင်းလို့ ရပါတယ် . XP/Vista/Windows732/64 bit စတဲ့ window operation system အတွက်ပါ . တစ်ခြား os တွေတော့ မရပါဘူး .
Posted by Peace at 3:09 PM0comments Links to this post
External HDD ကို Window7နဲ့ခွဲရအောင်
ကျနော်အခု ပြောချင်တာက External HDD ကို Partition ခွဲချင်ရင် Window 7နဲ့ ခွဲဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ External HDD ကို Partition ခွဲပြီးရင် Format ချဖို့လိုပါတယ်။ အခြား Window Vista
XP နဲ့ဆို GBများရင် များသလောက် Formatအတွက်ကြာတတ်ပါတယ်။ Window7နဲ့ဆို အရမ်းကိုသွက်လက်မြန်ဆန်ပါ
တယ်။ Partition ခွဲပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း Automatic ချပေးတယ်။ မယုံရင် စမ်းကြည့်ဗျာ...
Partiation ခွဲပုံဒီမှာမရေးပြတော့ဘူး။ သိချင်ရင် အောက်ပါပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး စမ်းနိုင်ပါတယ်။
Posted by Peace at 1:20 PM0comments Links to this post
Languages ပေါင်း 75 ခုကျော်နဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုပေးထားတယ်..၊word တစ်ခုကိုလည်း Oxford , longman , Wekipedia ,Dream စတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ Dictionary ...